Thola umsebenzi njengomshayeli wendiza ye-drone ngenxa yale webhusayithi | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
UJoaquin Garcia Cobo | | drones
Ngenxa yenani elikhulu lomsebenzi osakazwa cishe nsuku zonke nganoma yiluphi uhlobo lwenethiwekhi, ukuqoshwa kwama-drones kuyindlela yosuku, ngenxa yalokhu akumangazi ukuthi abantu abaningi ngokwengeziwe funa abashayeli bezindiza abathile be-drone ukwenza uhlobo oluthile lomsebenzi okhokhelwayo futhi okuphambene nalokho, abashayeli bezindiza be-drone abafuna ukuqashwa ngomuntu wokuzijabulisa ngokundiza umshini wabo oyigugu.
Kungakho abantu abaningi befuna ukuthi bangaba kanjani ngumshayeli wendiza ye-drone futhi bathole imali ngalo msebenzi omusha owenza ikusasa elihle.
Kucatshangwa ukuthi eminyakeni embalwa, I-10% yomkhakha wezindiza izokwakhiwa ngama-drones nemisebenzi ehlobene nale mishini, okuthile okumangazayo kwabaningi nendlela yekusasa kwabanye.
1 Kuthatha ukuthini ukuba ngumshayeli wendiza ye-drone?
2 Ungakutholaphi ukunikezwa kwemisebenzi njengomshayeli wendiza ye-drone?
Kuthatha ukuthini ukuba ngumshayeli wendiza ye-drone?
Lokho kusho, iningi lenu lizozibuza ukuthi kudingekani ukuba ngumshayeli wendiza ye-drone. Okokuqala, kufanele kwaziwe ukuthi ukusetshenziswa kwe-drone akugcini ekhonweni noma emalini, okungukuthi, njengelayisense yokushayela, umuntu angasebenzisa imoto ngaphandle kokuba nelayisense yokushayela futhi ngokufanayo indlela yemodi umshayeli wendiza angashayela i-drone ngaphandle kokuba nezimvume ezihambisanayo. Lokhu kungabonisa inkinga enkulu ngokuhamba kwesikhathi ngoba kunama-drones amaningi ezingane namadivayisi aqhutshwa yizingane, ngokunengqondo, ezingenayo imvume yokundiza lawa madivayisi.
Yenza lula3D manje nangeSpanishi
Kepha ake sicabange ukuthi asizona izingane futhi sifuna ukuziphilisa njengomshayeli wendiza ye-drone. Kulokhu, kufanele siqale siye ku- iwebhusayithi esemthethweni ye-AESA, i-State Aviation Safety Agency. Kule webhusayithi sizothola umkhombandlela wezifundo zokuba ngumshayeli wendiza ye-drone. Le webhusayithi ibalulekile ngoba ngaphezu kokuba yiyona kuphela indikimba esemthethweni ngaphakathi kweSpain elawula konke okuphathelene nabashayeli bezindiza ze-drone, futhi iqukethe nezinto zokudlulisa ukuhlolwa komshayeli we-drone nezimpawu zesivivinyo. Ngokuhambisana nalokhu kuhlolwa, kufanele wethule isitifiketi sezokwelapha ukuthi sisesimweni esifanele ngokomzimba.
Uma siphumelela isivivinyo, kufanele sibhalise kuwebhusayithi ye-AESA njengomshayeli wendiza osemthethweni we-drone, inqubo yamahhala ukuthi ukuphela kwento ezodinga ukuthi sidlulise ukubuyekezwa kwemishini yethu ngezikhathi ezithile.
Njengoba ukwazi ukubona, ukulawulwa komshayeli wendiza ye-drone akuhlukile kakhulu ekulawulweni kwelayisense yokushayela futhi, kwabaningi, izindleko zingaba ngaphansi kwezincwadi zokushayela uqobo.
Ungakutholaphi ukunikezwa kwemisebenzi njengomshayeli wendiza ye-drone?
Kuleli qophelo uzozibuza ukuthi ungakuthola kuphi ukunikezwa kwemisebenzi njengabashayeli bezindiza be-drone. Ngaphambi kwalokho, okokuqala kulula ukucacisa ngemisebenzi engenziwa ngekhadi elinjalo.
Njengamanje eSpain, ama-drones asetshenziselwa imibiko yezithombe, njengengxenye yezenzo zeSpanish Civil Protection Service, ukuhlola izindawo ezinkulu zomhlaba, ukuvuthwa kwezolimo, ucwaningo lwasemoyeni noma ucwaningo lwezinto zakudala. Zingasetshenziselwa ezinye izinhloso kepha okwamanje azisetshenziswanga noma azifakiwe kwimithethonqubo, sibhekisa emisebenzini efana nokuthuthwa kwezinto, ukusebenza njengama-satellite amancane noma ezinye izinhloso okuxoxwa ngazo emibukisweni emikhulu noma ama-CEO ezinkampani ezinkulu zobuchwepheshe.
Ungayicisha kanjani i-Raspberry Pi
Lokho kusho, kusobala ukuthi ukunikezwa kwemisebenzi kuphezulu, kuphezulu kakhulu futhi lokho kusivumela ukuthi sithole ukunikezwa kwemisebenzi ezindaweni ezahlukahlukene: kusuka kuphosta ejwayelekile enkampanini lapho ithi "Umshayeli we-Drone wayefuna" kwiwebhusayithi yomsebenzi efana ne-InfoJobs. Kepha kukhona namakhasi e-web adalelwe le njongo, ukunikela ngemisebenzi emikhulu yokushayelwa kwabashayeli bezindiza.
Ngalo mqondo wazalwa ama-droners.io, ikhasi lewebhu lapho usesha khona faka abashayeli bezindiza abanentshisekelo kulolu hlobo lwezinsizakalo. Uma uzungeza ikhasi uzobona ukuthi kunezindlela ezimbili zokungena, kungaba ngumuntu othintekayo enkonzweni noma, ngesicelo sokubhalisa, ubhalise kuyo njengomshayeli wendiza ye-drone bese uqala ukuthola izipesheli zokuthola izinkonzo zakho. Ngaphandle kokungabaza isinyathelo esingaphezu kokuthakazelisa.
Akungabazeki ukuthi ungaphezu komqondo othakazelisayo, yize okwamanje kuyiqiniso ukuthi kunjalo impela ngokwendawo kukhawulelwe ngokwamukela kuphela izindawo ezithile zase-United States. Abashayeli bezindiza, uma sebebhalisiwe, bahlukaniswa ngezigaba ezifika kwezingu-11 ezahlukahlukene lapho sithola khona imishado, amaphathi, ezemidlalo ... bekwazi ukukhokhela umshayeli wendiza ngemisebenzi yakhe noma ngehora lomsebenzi owenziwayo.
Enye inketho yokukhuluma isiNgisi yile Umagazine, iwebhusayithi ethakazelisa kakhulu lapho singeke sithole kuphela ukunikezwa kwemisebenzi kepha futhi sizothola isithangami esinamandla mayelana nama-drones.
Amawebhusayithi ngeSpanishi nawo akhona kepha maqondana nalokhu amakhasi amabili kuphela avelele: I-Pilotando.es y busisiwe.pro. Ngamakhasi ewebhu anokuthutheleka okukhulu kwabashayeli bezindiza ze-drone futhi nabasebenzisi abafuna ukuqasha abashayeli bezindiza abangochwepheshe noma okungenani abashayeli bezindiza abanezimvume ezihambisanayo.
Kancane kancane lezi zingosi zomsebenzi ziyakhula, njengezidingo zabashayeli bezindiza kanye nabashayeli bezindiza uqobo. Ukuthola umbono, Kukhona cishe abashayeli bezindiza abalawulwa nge-9.000 kulo lonke elase-European Union, okungukuthi, ngawo wonke amaphepha nezimvume ezisemthethweni, zemakethe yabantu abayizigidi ezingama-700. Ungathola malini njengomshayeli we-drone?
Leli yiphuzu lapho abantu abaningi bazobe bebukele futhi mhlawumbe iphuzu lapho kunolwazi oluncane khona nezinkomba. Amawebhusayithi ahlobene nezifundo zokushayela i-drone enza lokho umshayeli wendiza angaba nomholo wonyaka wama-euro angama-100.000, okuthile okungenzeka uma ungungcweti ngempela ohamba kuyo yonke i-European Union futhi-ke, ungazivumela ukuthi uhambe phakathi kwamazwe uhlale lapho usebenza. Lokho kusho ukuthi, umsebenzi omuhle impela kepha futhi ubiza kakhulu.
Okwenzeka okungokoqobo, okungukuthi, kulabo abazodlula eSpain kuphela, iholo elijwayelekile lomshayeli wendiza ye-drone ngeke leqe ngaphezu kwe-2.000 euros ngenyanga.
Lokhu kungenxa yokuthi imisebenzi edingeka kumshayeli we-drone yimbalwa.
ESpain, umshayeli wendiza ye-drone angaziphilisa njengesisebenzi, aqashwe yinkampani edinga usizo lomshayeli wendiza ye-drone noma eyedwa, ngokuba umuntu ozisebenzayo futhi onikela ngokwenza umsebenzi noma imisebenzi ehlobene nedrone. Kulokhu kokugcina, umshayeli wendiza ye-drone unemakethe eningi ngokuba nemisebenzi eminingi angayenza, kodwa futhi kuyiqiniso ukuthi isikhathi sakhe asikwazi ukukhokhiswa ngamanani aphezulu ngoba ubengeke athole ngisho nomholo omncane ngoba umuntu ojwayelekile ubengeke akhokhe umshayeli wendiza ye-Drone 2.000 euros noma ngaphezulu yokubheka ipulazi noma ukwenza ividiyo yedolobha.
Uma kwenzeka uqashwa yinkampani, umholo ngaphezu kokusondela noma ukweqa ama-euro angama-2.000 XNUMX ngenyanga, kunokuvikeleka abangenakho ukuthi ngenyanga ngayinye uzothola umholo ofanayo, noma ngabe unayo umsebenzi. Kunoma ikuphi, kucatshangelwa isimo sokuqashwa eSpain nokuthi ukuba ngumshayeli wendiza ye-drone kuwumsebenzi omusha, umholo wokusebenza njengomshayeli wendiza ye-drone awuphezulu kakhulu, okwamanje.
Isidingo somshayeli wendiza ye-drone asikho e-European Union kuphela kepha naseSpain nakwamanye amazwe angaphandle kwe-EU neSpain. Leli yithuba lebhizinisi kwabaningi futhi liyindlela yokuziphilisa ngalo.
Kodwa-ke, lUmthethonqubo wokusetshenziswa nenjongo yama-drones namanje awucaci kahle futhi ongadala izinkinga ngemisebenzi ethile, okuthile okwenzeka okwamanje eSpain.
Kunoma ikuphi, kuyahlonishwa ukuthi imisebenzi emisha ehlobene nobuchwepheshe iyavela engabandakanyi "ukubophela" isisebenzi kwikhompyutha, njengokuba ngumshayeli wendiza ye-drone Awucabangi?
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » drones » Thola umsebenzi njengomshayeli wendiza ye-drone kule webhusayithi
u-ivan martin kusho
Sanibonani, ngingumshayeli wendiza onelayisense we-Drone kanye nedrone yami eMadrid
Phendula u-ivan martin
UJuan Antonio kusho
Yebo, nginentshisekelo yokusebenza ukuqopha nge-drones, ngine-drone yami, ilayisense yokushayela phambili futhi ngisebenza nokuhlela ividiyo. ukubingelela!
Phendula ku-juan antonio
Umshayeli wendiza ye-Drone yi-AESA
URamon Merino Lobato kusho
umshayeli wendiza ye-drone yi-AESA ku-vigo
Phendula uRamon Merino Lobato
Sawubona, igama lami nginguRamon futhi ngingumshayeli we-drone othuthukile, (AESA)
UMiguel Ranera kusho
Ngiwumshayeli wendiza nomqhubi ophethe ama-drones ami
Ngiyakwazi ukundiza ngendiza ebonakalayo ngaphesheya kobubanzi bokubuka
Imisebenzi yocwaningo nentuthuko
Ukuthwebula izithombe, ukuqopha kanye nocwaningo lwasemoyeni (ucwaningo lwesimo sendawo, i-photogrammetry)
Ukubheka nokuqapha okwasemoyeni kufaka phakathi ukuqoshwa kanye nemisebenzi yokuqapha umlilo ehlathini
Imisebenzi ephuthumayo, yokusesha neyokutakula
Phendula uMiguel Ranera
U-Oscar david Briñez Fonseca kusho
Ngingu-Oscar David Briñez Fonseca, i-RPA Commercial Pilot eqinisekisiwe eColombia, nginolwazi ngamavidiyo nezithombe zasemoyeni, imicimbi, izakhiwo, amanethiwekhi kagesi, izakhiwo.
Futhi-ke ngifuna umsebenzi wokunikela ngolwazi lwami kulabo abanentshisekelo futhi bafunde okuningi.
Phendula u-Oscar david Briñez Fonseca
Igama lami nginguRafa futhi ngingumshayeli we-drone othuthukile (AESA) onezidloni zami.
Ngibuye ngilungise futhi ngilondoloze i-drone.
Njengamanje ngihlala ePalma de Mallorca.
Izinkampani zeDrone eSpain kusho
Kukhona iwebhusayithi efana naleyo eshiwo nguJuan Luis yezinkampani ezisebenza nge-drone zaseSpain. Kumahhala ngokuphelele, alunalo uhlobo lwekhomishini futhi ukuthengiselana kuqondile phakathi kweklayenti nomphathi we-drone. Ngicabanga ukuthi kungathokozisa ukuthola umsebenzi nezinsizakalo zamakhasimende acela izilinganiso zobuchwepheshe nezomnotho ngewebhusayithi yePilotando.
Phendula ezinkampanini ze-drone eSpain
UJose Angel kusho
Sawubona, igama lami nginguJose Ángel, enesihloko somshayeli wezindiza othuthukile okhishwe yi-AESA.
Ngingumnikazi we-Phanton 4 pro RPA. Ngiyisisebenzi sikahulumeni emkhakheni wezokuphepha, ngakho ngingumuntu ozimisele futhi othembekile.
Indawo yaseMurcia naseCagagena.
Imeyili yami. danielcancan09@gmail.com.
UMSHAYELI KANYE NOMSEBENZI WOKUSEBENZA ESIFUNDENI SE-ASTURIAS
I-YUNEEC TYPHOON I-DRONE YAKHO
UDaniel fernandez kusho
I-PILOT ene-ADVANCED DRONE TITLE ekhishwe yi-AESA
Ngine-DRONE yami Phanton 4 pro
Okuhlangenwe nakho kokuhlelwa kwevidiyo ngezinhlelo ezahlukahlukene
Unentshisekelo Ekuthwebuleni Izithombe, ukuqopha njll ...
Izinga le-English C1 ne-German A2
Ukutholakala kwezwe kokubili ezweni nakwamanye amazwe
Phendula uDaniel Fernández
sawubona ngifuna izidingo zomshayeli wenkampani yabasebenzi
UJuan Carlos Villa kusho
Igama lami nginguJuan Carlos. Nginesihloko sesichungechunge sesi-2 ne-radiophonist ene-Phantón pro v2 drone kanye nethuba le-Inspire 2.
Nginelayisense yokusebenza. Ngaphandle kwalokho, nginenkampani ebukwayo nokuqala ukurekhoda kunoma iyiphi iphrojekthi.
Oxhumana naye; gd3video@hotmail.com
Phendula uJuan Carlos Villa